Allgedo.com » 2017 » February » 08
Home » Archive Daily February 8th, 2017
Daawo taariikh noolaleedka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo
Hoos ka daawo taariikh noolaleedka madaxweynaha cusub ee maanta lagu doortay Muqdisho, mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Read More →
Dhageyso heesta maanta-maanta-maanta, waa maalin weynee maanta…
Hoos ka dhageyso hees ay umadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba ugu dabaal-dageyso mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo maanta loo doortay madaxweynaha Soomaaliya. Read More →
Daawo qaabka ay u dhacday doorashadii maanta iyo Farmaajo oo loo dhaariyay madaxweynaha Soomaaliya
Hoos ka daawo qaabka ay u dhacday tartankii dheeraa ee madaxweynaha Soomaaliya iyo mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo madaxweynaha Soomaaliya loo dhaariyay. Read More →
Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ku guuleystay madaxweynaha Soomaaliya
Tartankii madaxweynaha Soomaaliya ee ka socday xarunta Ex Afisiyoone oo ku taal magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku guuleystay mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa markuu arkay in uu Farmaajo si weyn uga horeeyo ayaa waxuu go’aansaday in uu tartanka isaga haro. In yar kaddib un markii uu Xasan Sh. Maxamuud ka tanasulay tartankii...
Wajiga labaad ee tartanka madaxweynaha oo ay 2 nin isugu soo hartay
Tartankii madaxweynaha Soomaaliya ee ka socday magaalada Muqdisho, gaar ahaan Hool si weyn loo ilaalinaayo oo ku taala Afisyoone ayaa waxaa goor dhow kusoo gaba-gaboobay wajigii labaad ee tartanka madaxweynaha Soomaaliya. Wajiga labaad ayaa waxaa kusoo hormaray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo helay 186 iyo Xsan Sheekh Maxamuud oo helay 97. Sheekh Shariif Sh. Axmed ayaa asagu helay 46 cod, taasoo...
Saddex musharax oo wajigii labaad ee tartanka madaxweynaha usoo gudbay
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa oo la filayay in at horay u dhacdo bishii August ee sanadkii tagay, balse uu dib u dhac ku yimid ayaa maanta si rasmi ah uga furantay magaalada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Ilaa iyo hadda waxaa soo geba-geboobay wareegii koowaad ee doorashada ayada oo inta badan dadkii tartanka ku jiray ay ku hareen wareegii koowaad. Musharaxii ugu danbeeyay ee ka tanaasulay...